Exclusive भखरै एकै घरको ३ जना बौलायो भाइरल बन झा*क्री ले भु*त लाई यस्तो चुनाउती दिदै हेर्नुस् -
Home News Exclusive भखरै एकै घरको ३ जना बौलायो भाइरल बन झा*क्री ले भु*त...
Exclusive भखरै एकै घरको ३ जना बौलायो भाइरल बन झा*क्री ले भु*त लाई यस्तो चुनाउती दिदै हेर्नुस्
किसानमारा कानुनविरुद्ध महिनौंदेखि शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिएका भारतीय किसानहरू अविचलित छन्, निहत्था ती आन्दोलनकारी साहसी हुन् । वैध र अवैध दुवै शक्तिले सम्पन्न शासकले हजार प्रपञ्च रचेर किसानलाई हराउने सम्भावना प्रबल छ ।
तर संसारले देखेको छ— सशस्त्र बल मात्रै होइन, दुष्प्रचारका सबै संयन्त्र उपयोग गर्दासमेत लुकाउन नसकिएको भयग्रस्त शासकको असली अनुहार । डरपोकहरू क्रूर हुन्छन्, कोमलता र प्रेमले लछ्रप्पै भिजेका मान्छेहरू साहसी हुन्छन् ।
दुस्साहसी शासकका सनकबारे धेरै किस्सा रचिएका हुन्छन् तर तिनले परिभाषित गरेको साहस सधैं क्रूर र प्रेमद्वेषी हुन्छ । वीरताको प्रचलित नेपाली गाथामा जनताको कम, शासककै महिमा बढी प्रभावी छ । सामूहिक प्रेमको कम, क्रूरता र षड्यन्त्रका वर्णन प्रचुर छन् । औपचारिक रंगीन संकथनले ढाकिएको इतिहास उधिन्न सक्नेले शासकका भयभीत अनुहार देखेका हुन्छन् । त्यो भय आम मान्छेको स्वतन्त्रता–अनुरागसँगको भय हो । सबै खाले उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन निहत्थाहरूले व्यक्त गरेको लालसासँगको डर हो । सामान्य जीवनयापन गर्न नदिने प्रपञ्च रच्ने शासक वा प्रणालीविरुद्ध अभिव्यक्त आक्रोशसँगको त्रास हो ।
जो जनता भएर होइन, नागरिक भएर होइन, आम नागरिकको प्रतिनिधि भएर होइन, शासक भएर सत्ता र शक्तिमा छ, ऊ सधैं डरपोक हुन्छ । शक्ति प्रदर्शनको निर्लज्ज स्पर्धा मञ्चन भइरहेको काठमाडौंमा अचेल भयभीत शासकको आवाज सबैभन्दा चर्को र कर्कश छ । आफू हिँड्ने बाटा, बस्ने खोपी र उक्लने मञ्चवरपर काँडेतार बारेर, सैनिकका पहरा खडा गरेर, कार्यकर्ता नामको हूलले घेरिएर डरपोक शासकहरू साहसी भएको ढोङ गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको साँचो अनुभूतिका लागि सबैभन्दा पहिला यी ढोङहरू बुझ्न, सतहमा फैलाइएको आवरण च्यात्न र जर्जर यथार्थको सामना गर्ने आँट जुटाउन आवश्यक छ । त्यसैले अहं महत्त्वको यो प्रश्न नसोधी अघि बढ्न असम्भव छ— यति साहस जुटाउने राजनीतिक शक्ति कति छन् र आम नागरिकपंक्ति यथार्थ सामना गर्न कतिको तयार छ ?
Previous articleदुखद खबर: यीनै हुन शिक्षकको कु.टाइबाट मृ*त्यु भएका १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशी !
Next articleभागरथिको दोषिलाई फा`सि देउ भन्दै रबि लामिछाने बैतडिको सडकमा (हेर्नुस् भिडियो)